कोरोना महामारीपछिको नेपाल कस्तो होला ?
अहिले विश्वभर कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । यतिबेला किन हो सम्पन्न र शक्तिशालि राष्ट्रहरुतिर महामारीले निकै बढी संकट निम्त्याएको छ । कहिलेकाँही प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तले पनि काम गर्छ होला, यतिवेला त्यस्तै अनुुमान लगाउन सकिन्छ । गरिब र कमजोर वर्गलाई भन्दा ठूूला र शक्तिशाली भनिएकाहरु बढी पीडित बनेका छन् । तर अब कोरोना माहामारिपछि विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । जसलाई संक्षिप्तमा निम्नअनुुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
बाह्य रोजगारीका अवसर गुुम्ने
अहिले संसारका धेरै मानिसहरु आ–आफ्नै देश भनौं या स्वदेश फर्किएको अवस्था छ । सवै देशको प्राथमिकतामा सवैभन्दा पहिला आफ्नै देशको नागरिक पर्दछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्ता परनिर्भर रहेका देशका नागरिकहरु धेरैले रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढेको छ । बाह्य देशमा तत्कालै धेरै रोजगारीका अवसर नबढ्ने या अन्य देशबाट कामदार नमगाउने अवस्थाका कारण लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउने अवस्था देखिएको छ । तर अवस्था सहज बन्दै गएपछि केही वर्षमा फेरी रोजगारीका अवसर श्रृजना हुनेछन् । तर अहिले चाँडै नै भोग्नुुपर्ने वा देखिन सक्ने अवस्थाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
बेरोजगारीको संख्या अत्यधिक बढ्ने
त्यसै पनि नेपालीहरु दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिएको अवस्था थियो । अब विदेशमा समेत रोजगारीका अवसर केहि समयलाई बढ्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्रै बाहिरी देशका नागरिकलाई स्थान दिने भएका कारण नेपालीहरु तुुरुन्तै प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । किनकी संसारका सवै देशमा आर्थिक अवस्था खस्केको छ । उद्योगहरु ठप्प भएको अवस्था छ । विश्वभर नै बेरोजगारीको संख्या बढ्ने छ । नेपालले चाँडै नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् ता पनि केही समयसम्म अत्याधिक संख्यामा वेरोजगारी बढ्नेछन् ।
कृषि क्षेत्रले महत्व पाउने
नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि कृषिले नै देशलाई जोगाईराखेको छ । लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन सक्ने भनेकै कृषि क्षेत्रले हो । बाहिरी देशबाट आयात गर्नुुपर्ने वस्तुु कमी गर्न सकेमा पनि नेपाल र नेपालीका लागि ठूूलो उपलब्धि हुनेछ । लाखौं बेरोजगारहरुको तत्कालका लागि एउटा मूूख्य विकल्प कृषि नै हो । अहिले पनि यदि कृषि क्षेत्रले आधार नदिएको भए महामारीसंगै भोकमरीको समस्या बढ्ने निश्चित थियो । बाह्य मुलुुकबाट आयात गर्नुपरेता पनि नेपालकै उत्पादनले धेरै धानेको छ ।
राजनैतिक क्षेत्रमा दवाव
राजनैतिक क्षेत्रमा पैंसाको बलमा मात्रै अगाडि बढ्नेहरुलाई जनताले छेकबार लगाउदै जानेछन् । कतिपय नेतृत्वहरु सम्पत्ति र लोकप्रियता दुवैका आधारमा अगाडि आउनेछन् ता पनि केवल सम्पत्ति, दादागिरी र कुुटनीतिकै आड्मा मात्रै अगाडि बढ्न खोज्नेहरु असफल बन्नेछन् । नेतृत्व सक्षम हुुनुुपर्ने जनताको दवाबले केही हद्सम्म राम्रा व्यक्तिहरु छनौट (फिल्टर) भएर आउनेछन् । यसको असर अब आउने निर्वाचनमा देखा पर्नेछ ।
सांस्कृतिक क्रियाकलाप बढोत्तरी
नेपाल संसारका देशहरुभन्दा केही फरक देश हो । यहाँ मानिसहरु मेलाजात्रा, साँस्कृतिक चाडपर्व र धार्मिक क्रियाकलापमा रम्ने गर्दछन् । यो विश्वकै लागि नमूूनायोग्य कुुरा हो । सानो देश भएर पनि होला, यहाँ जातिय र साम्प्रदायिक दंगा कसैले चाहेर पनि हुन सक्दैन । नेपालीहरुबीच एकप्रकारको एकता पनि छ । अब पनि मानिसहरु सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापलाई अँझ बढी महत्व दिनेछन् । यतिवेला पनि नेपालमा महामारीले ठूूलो रुप लिन नसक्नुु केही असल आचरण र व्यबहार पनि भएको सवैले आँकलन गरेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रले महत्व पाउने
कोरोना माहामारी यदि यतिकैमा सेलायो भने संसारका पर्यटकहरुका लागि नेपाल गन्तव्य बन्न सक्छ । यहाँका हिमाल, यहाँका जडिबुटि, यहाँका गाउँ, यहाँका संस्कृति , यहाँका रीतिरिवाज र यहाँका धार्मिक, सांंस्कृतिक कुराहरुले अँझ बढी महत्व पाउने छन् र धेरै पर्यटकहरु नेपाल आउनेछन् । यसले नेपालको आर्थिक अवस्थामा महत्वपूूर्ण टेवा पुर्याउनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अँझ बढि सुधार हुने
शैक्षिक सत्रको अन्तिम अवस्थामा भएर होला, एस इ ई दिने तयारी अवस्थाका विद्यार्थी बाहेक अरुलाई खासै असर परेको छैन । चैत्रको महिना त्यसै पनि विदा हुुन्थ्यो । बैशाख महिनाभर भर्ना अभियान नै हुुन्थ्यो । त्यस अर्थमा शिक्षा क्षेत्रमा खासै असर परेको छैन । कतिपय विद्यार्थीहरुका लागि त यो झनै आराम गर्ने समय मिलेको छ । सवै परिवार संगै बस्न पाएका छन् । अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई समय दिएका छन् । यदि महामारी यत्तिकैमा रोकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा थप सुुधारका प्रयन्न हुुनेछन् ।
स्वदेशी उद्योगले प्राथमिकता पाउने ।
अहिले उद्योगहरु ठप्प छन् । उद्योग क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ कैयौ उद्योगव्यबसायीहरु टाट पल्टेको अवस्था छ । देशभरका कुुखुुरापालक व्यबशायीहरु घाटामा छन् । अरबौंको क्षति भएको छ । देशभरका छापा सञ्चारमाध्यमहरुले अरबौंको नोक्सानी बेहोरेका छन् । यातायात क्षेत्रका व्यबशायीहरुले अरबौंको नोक्सानी बेहोरेका छन् । तरकारी तथा दुुग्ध सहकारीहरुले अरबौंको क्षति बेहोरेका छन् । सवै प्रकारका उद्योग व्यबशाय धरासायी बनेका छन् । तर अर्कोतिर आशाको किरण पनि देखा परेको छ । जसरी विदेशीएका धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन्, त्यस आधारमा पनि अब स्वदेशी उद्योग धन्दाहरुमा राज्यको लगानि अवस्य थपिने छ र सवै प्रकारका उद्योगहरु यसअघिको भन्दा राम्रा बन्नेछन् । रोजगारीका विकल्प खोज्ने क्रममा सवै प्रकारका उद्योगधन्दाहरु सुुरु हुने सम्भावना बढेको छ । केही समयसम्म राज्यले उद्योगलाई टेवा भने अवस्य दिनुुपर्छ ।
धनी र गरिब बीच असमानता बढ्ने ।
धनी र गरिबबीचको दुुरी भने अँझ बढ्ने देखिएको छ । अहिले पनि कतिपय ठूूला व्यापारीहरुका पशल निरन्तर चलिरहेका छन् । खाद्यान्न सम्बन्धिका पशल निरन्तर चलिरहेका छन् । ती पशलहरु अरु समयजस्तै निरन्तर चलेका छन् । दिनमा भए दिनमा र नभए रात्रीको समयमा भएपनि गाडि–गाडिमा सामान ओसारेका छन् । कतिपय सप्लायर्सहरुले पनि निरन्तर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले निर्माण सामग्री दिउसो नभए रातीमा पनि ढुुवानी गरिरहेका छन् । कमाउनेले यतिवेला पनि कमाएकै छन् । तर गरिब किसानहरु भने यतिवेला निकै मारमा छन्, तरकारी बारिमै कुहिएको छ, दुुध विक्रि भएको छैन ।
पशुुजन्य उत्पादन विक्री भएको. छैन । यसले गर्दा धनीहरु झनै धनी बन्दै गएका छन् र गरीबहरु झनै गरिब भएका छन् । यो दुुरी अँझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । किनकी गरिबले जतिसुुकै कमाए पनि उसको बचत दर अत्यन्तै न्यूून भईरहेको छ ।
भ्रष्टाचारमा कमी हुने
अहिलेको सामाजिक सञ्जाल र सूूचना प्रविधिको कारण भ्रष्टाचारमा भने कमी आउनेछ । अहिले विभिन्न मिडियाहरुले जनताको आवाज जस्ताको जस्तै बाहिर ल्याईरहेका छन् । यदि गाउँ गाउँसम्म मिडियाको पहुुँच विस्तार भयो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुनेछ । कामै नगरी काम गरेको प्रगति देखाउने वा थोरै काम गरेर धेरै गरेको देखाउनेहरु केहि न केही पक्कै सजग हुनेछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र र राज्य नियन्त्रीत संरचनाले महत्व पाउने
मानिसको लागि पहिलो धन हो कि स्वास्थ्य भन्ने कुुरा बहस्कै विषय हुुने गर्दछ । तर यतिवेलाको महामारीले स्वास्थ्य नै ठूूलो हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । धनी मुलुुकमा समेत मानिसहरु बच्न नसक्नु र धनपंैसाले समेत स्वास्थ्य जोगाउन नसक्नुले मानिसहरुमा यतिवेला फरक सोच बनाईदिएको छ । नेपालीहरुको रोगप्रतिरोधात्मक शक्तिका कारण नेपालमा महामारी नफैलिएको विश्वास पनि गरिएको छ । तर बाँच्नको लागि मानिसले जुुन क्रियाकलापहरु गरे, यसबाट स्वास्थ्य नै ठूूलो कुुरा भएको देखाउछ । यतिवेला देशभर नै स्वास्थ्यसम्बन्धि दक्ष जनशक्ति चाहिने कुुराको महशुुस गरिएको छ ।
रोगको परीक्षण गर्ने सम्म पनि जनशक्ति भएन भने सधैंभरी भाग्यकै खेलमा बच्न सकिदैन । यसर्थ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यले लगानि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । अर्कोकुुरा नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाले महामारीको बेला भरपर्दो सेवा दिन नसकेका कारण पनि राज्य नियन्त्रीत अस्पताल र जनशक्तिमा जोड दिने सम्भावना बढेको छ ।
राज्य संरचनामा परिवर्तन हुुने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केही असर पर्ने
जब राज्य नियन्त्रित व्यवस्था हुुन्छ, नागरिकहरुले सरकारलाई अभिभावकको रुपमा हेर्दछन् । तर सवै कुुराहरु राज्य नियन्त्रित बन्दै गयो भने कतिपय अवस्थामा निरंकुुश शासकहरु पनि उदाउन सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । गलत गर्नेहरुलाई क्षमा सम्म पनि नदिने अवस्था आउछ । लेख्नेहरु लेख्न डराउछन्, बोल्नेहरु बोल्न डराउछन् । यस्तो अवस्थामा शासकको सनकको भरमा कहिलेकाँही अप्रिय घटनाहरु घट्दछन् । राम्रोसित अध्ययन अनुुसन्धान नै नगरी शैंन्यबल र सुरक्षाबल प्रयोग भयो भने विकास त होला, तर नागरिकहरुमा असन्तुुष्टि भने बढ्दै जान्छ पुुनः व्यवस्था परिवर्तनको आवाज उठ्छ, र यसरी नै व्यवस्था परिवर्तन भइरहने र अस्थिरता भइरहने सम्भावना रहन्छ । यसको लागि राज्यले एउटा बलियो कानून बनाउन जरुरी हुुन्छ । सनकका भरमा कोही चल्न नपाउने व्यवस्था बनाईनुुपर्दछ ।
बाँकी अंश पुुनः प्रकाशन गरिनेछ ।